Home Somali News Xiisad ka dhalatay Waraaqdii Jamhuuriga Maraykanka u diray Iran
Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka John Kerry ayaa beeniyey hanjabaadii kasoo yeertay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maraykanka oo waraaq hanjabaad ah todobaadkan u diray hogaanka dalka Iran.
Xildhibaanada 47 gaaraya ee ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee mucaaridka Maraykanka ayaa waraaqda ay u direen Iran ugu hanjabay in Baarlamaanka Maraykanka uu bedali doono heshiis walba oo dhexmara Xukuumada Obama ee wakhtigeeda sii dhamaanayo iyo dowlada Iran.
John Kerry Xoghayaha Arrimaha Dibada ahna ninka u qaabilsan Maraykana wadahadalka dowlada Maraykanka kula jirto Iran ayaa sheegay in heshiiska uu saxiixo Madaxweynaha Maraykanka aysan awood ullahayn inay bedalaan Baarlamaanka.
Xiisada ka dhalatay qoraalka ay xildhibaanada Jamhuuriga u direen dalka Iran ayaa u muuqata mid waji gabax ku noqotay xisbigaasi.
Mucaaridka ayaa markii hore islahaa qoraalkan ku cadaadiya Madaxweyne Obama inuusan heshiis la gelin Iran, balse waxay kala kulmeen shacabka iyo xildhibaanada kale cambaareyn weyn.
Dhinaca kale dowlada Iran ayaa laga yaabaa inay u adeegsato waraaqda xildhibaanadan inay qiil uga dhigato in Maraykanka dhankiisa ka burburiyey wadahadalka waa hadii ay labada dhinac ku heshiin waayaan wadahadalka hada u socda.
Somaliland: Xisbiga UCID Oo Fashiliyay Fadeexado Dul-hoganaya Safarkii Madaxweyne Biixi Ee Berbera + Warshada Sifaynaysa Shidaalka Oo Uu Been Abuur Dadka Lagu Dhacayo Ku Tilmaamay